Faah faahin:- Dagaal saakay ka dhacay deegaanka Af-urur iyo sida ay haatan xaaladdu tahay – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Dagaal saakay ka dhacay deegaanka Af-urur iyo sida ay haatan xaaladdu tahay
Dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab ayaa saakay weerar culus ku qaaday saldhigga ciidamada daraawiishta Puntland ay ku leeyihiin deegaanka Af-urur oo qiyaastii 100-km u jirta magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari.
Weerarkaasi oo la sheegay inuu ahaa mid aad u xoogan waxaa Al-shabaab u suurto-gashay inay muddo saacado ah la wareegaan saldhigga ciidan ee deegaanka Af-urur, iyadoona ciidmadii hore saldhigaasi ugu sugnaa ay isaga baxeen, kadib markii dagaalka looga awood roonaaday.
Taliyaha ciidamada daraawiishta ee gobolka Sanaag Korneel C/laahi Cumar Canshuur oo la hadlay warbaahinta ayaa u xaqiijiyay in dagaal aad u qaraar uu saakay ka dhacay saldhigga Af-urur, dagaalkaasina uu socday muddo ka badan 2 saacadood.
Dhinaca kale, ciidamadii daraawiisha Puntland ee saakay dagaalka looga saaray saldhigga deegaanka Af-urur ayaa la sheegayaa inay dib ula wareegeen saldhigaas, kadib markii ay dagaal rogaal celis ah halkaasi kusoo qaadeen.
Waxaa haatan xaalad kacsanaan ah laga soo sheegayaa deegaanka uu saakay dagaalka ka dhacay, iyadoona isgaarsiintii ka jirtay halkaasi ay weli maqan tahay.
Dhinaca kale, afhayeenka dhinaca howlgalada ciidanka Al-shabaab C/casiis Abuu Muscab oo la hadlay warbaahinta ayaa dhinaciisa ka sheegay in dagaalka saakay ay ku qaadeen deegaanka Af-urur ay ku dileen 61 askari oo ka tirsan ciidamada Puntland, islamarkaana ay ku qabsadeen 16 gaari dagaal ah.